माओवादी नेता भन्छन्, ‘मन्त्री नपाए देह त्याग गर्छु भन्दै आए’, को हुन् ति नेता ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
माओवादी नेता भन्छन्, ‘मन्त्री नपाए देह त्याग गर्छु भन्दै आए’, को हुन् ति नेता ?
काठमाडौं, ५ साउन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार विश्वासको मत लिएसंगै अब मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरेका छन् । धेरै राजनीतिक दललाई समेट्नुपर्ने भएकाले उनका लागि मन्त्रीपरिषद् विस्तार कठिन हुने देखिएको छ । विपक्षमा रहेको जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने सम्भावनासंगै नेताहरुको दौडधुप पनि सुरु भएको छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मन्त्रीका लागि नेताहरुको दौडधुप सुरु भएको हो । अन्य पार्टीमा पनि छलफल चलेको छ । तर माओवादीका एक नेताले सोमवार अनौठो स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले मन्त्रीका लागि नेताहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको बताएका छन् । उनले आफुलाई मन्त्री नबनाए देहत्याग गर्ने सम्मको चेतावनी आएको बताएका छन् । नेता न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बिहानै खतरा खबर आयो, पार्टीका कतिपय मुर्धन्यहरुले यसपटक पनि मन्त्री पाइएन भने आ त्म ह त्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे भन्ने पो आयो त ?’ यद्यपि उनले कसलाई त्यस्तो संकेत गरेका हुन् खुलाएका छैनन् ।
प्रदिप पंगेनी/मलेसिया । मलेसिया ८ देखि ९ लाख नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलूक, आफ्नो देशमा...